Archive du 29-avril-2022
Hery Rajaonarimampianina Tsy mety tafody, noho ny vadiny …
Tahaka ireo mpitondra ambony sasany tamin’ny fotoan’andron’ny Fitondrana HVM izay voatery nanao sesin-tany ny tenany any ivelany, dia isan’ireo olona nandao ny firenena ihany koa ny Filoha teo aloha Atoa Hery Rajaonarimampianina mivady.
Tezaina hiraviravy tànana
Lahatra sa sitrapo ny fahantrana ? Fanontaniana mila valiny ho an’ny firenena sy ny vahoaka io. Toa zary tezaina sy voataiza hanaiky lembenana sy tsy ho afa-manoatra mantsy ny vahoaka Malagasy.
UKRAINE MANOMBOKA DAROHAN’NY ROSIANINA I KIEV
Niditra tamin’ny andro faha-64 omaly ny fanafihana ataon’ny Rosianina any Ukraine. I Kiev renivohitra no nanomboka lasibatry ny daroka baomba omaly.
Fanomezana ny praograman’ny filoham-pirenena Asa na hitohy na serasera manjelatra indray
Asa na hitohy na serasera manjelatra hambaboana ny fon’ny mpanara-baovao indray ny fanomezana ny praograman’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, izay hita ho niatomboka omaly.
QMM Taolagnaro Mpiasa 700 voasakana tsy afa-nody natory
Tsy afaka nody fa voatery nijanona tao anatin’ny toeram-piasany ireo mpiasan’ny kaominina manodidina ny 700 isa ao amin’ny QMM Taolagnaro alin’ny alarobia hifoha omaly alakamisy.
Fiakaran’ny vidin-tsolika Efa miomana amin’ny fiakaran’ny saran-dalana ireo taxi be
Efa miomana sahady ny amin’ny mety ho fiakaran’ny vidin-tsolika ireo fiara fitateram-bahoaka rehetra eto amintsika. Lohalaharana amin’ireny ny taxibe,
Toamasina Vosambotra ireo vehivavy roa nisoloky minisitera
Vehivavy roa mpisoloky maka vola amin’ny anaran’ny ministera no sarona tany Toamasina. Mitety orinasa any an-toerana izy mirahavavy ireto ary maka vola,
Mpamily sy resevera tsy nanara-dalàna Nifona ampahibemaso fa tsy hanary mpandeha an-dalana intsony
Taxibe iray ao amin’ny zotra 172 mampitohy an’ny 67 ha sy Andoharanofotsy indray no tratran'ny zandarimariam-pirenena ao Andoharanofotsy sy ny kaoperativa afak’omaly alarobia 27 aprily
Ambatondrazaka Maty notsatohan’ny vadiny antsy ilay vehivavy
Renim-pianakaviana 35 taona no maty tsy tra-drano notsatohan'ny vadiny tamin’ny antsy tany Ambatondrazaka.
Andekaleka Manomboka ny andrana fampandehanana ilay milina G2
Nanatanteraka fidinana ifotony tany amin’ny toby famokarana herinaratra azo avy amin’ny rian-drano tany Andekaleka ny ministry ny angovo sy ny akoranafo, Andry Ramaroson,
Korontan’ny Baolina kitra Lasa sorona tanteraka ny Barea
Hanao fanambarana eny amin’ny Kianja Barea Mahamasina ny eo anivon’ny Federasionina Malagasy ho an’ny taranja baolina kitra (FMF) anio, raha ny tsilian-tsofina.
Fanamboarana ny RN41 Efa mizotra ny ara-taratasy
Efa madiva ho vita ny lalana "Entrée Fandriana" ao amin’ny faritra Amoron'i Mania, hoy ny fampitam-baovaon’ny governora ao an-toerana, Mamiarisoa Radaloson.
Fampiakarana karama Mbola ho ady hevitra be ny an’ny tsy miankina
Anio 29 aprily 2022 amin’ny 10 ora no voafaritra fa hanaovana ny fifampidinihan’ny filoha Rajoelina Andry hanasana ny sehatra tsy miankina ka hiresahan’izy ireo ny fomba fampiakarana, araka ny serasera navoakan’ny Fiadidian’ny Repoblika
“Eid Al-Fitr” fetin’ny Silamo Tsy hiasana kanefa handraisan-karama ny 2 may
Natao ho andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny alatsinainy 2 may 2022, fetin'ny Eid Al-Fitr, araka ny fampahafantarana mitondra ny laharana N°56 MTEFPLS/SG//DGTLS/2022 nataon'ny minisiteran'ny Asa,
Ampanefy Atsimondrano Tratra ilay rangahy nanolana sy nandratra ny mpanampiny
Tratra omaly alakamisy vao mangiran-dratsy tao Ampanefy Atsimondrano ny raim-pianakaviana iray nanolana mpanampy vaviny vao 12 taona monja.
Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara “Aleo handeha amin’izay ny raharaha Rehavana Michel”
Tontosa ny fivoriamben’ny Sendikan’ny mpitsara Malagasy na SMM tany Fianarantsoa sy Toliara raha ny tatitr’izy ireo tetsy amin’ny biraony tetsy Ankorahotra .
Tarika Haja Ny Kanto Hidera an’Andriamanitra amin’ny kolontsaina sy soatoavina Malagasy
Nampahafantarina omaly tetsy Anosibe ny fahaterahan’ny antoko mpihira ara-pilazantsara antsoina hoe Haja Ny Kanto.
Tempo Gaigy Handrotsirotsy ao amin’ny Le Zoma Antaninandro
Na dia etsy amin’ny Le Zoma Antaninandro-Faravohitra aza no hitondra ny vazon’izy ireo amin’izao endriny ankehitrin’izao ny tarika isan’ny sangany tamin’ny fiangaliana « dance »
Vondrona Eoropeanina Frantsay no ho ambasadaorony vaovao
Handao tsy ho ela an’i Madagasikara ny Ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeanina dia ilay teratany Italianina SEM Giovanni Di Girolamo, raha ny voalazan’ny fampahalalam-baovao vahiny iray omaly.
Kaominina Antananarivo Natao inona ny vola no taratasy avy tsy misy ?
Manaitra ary mahavalalanina ny nahita ny taratasy avy ao amin’ny Kaominina Antananarivo mitondra ny laharana N°182/CUA/M/DIPLES 2022 mitondra ny datin’ny 27 aprily 2022,
Mahajanga Zanak ‘i Maroantsetra ilay nisy namono
Nianatra ho mpampivelona sy mpitsabo mpanampy no anton-dian’i Elisabeth Rasoanirina tao Mahajanga, ilay tovovavy nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tany an-toerana ny Talata maraina lasa teo izay natao tao
Adihevitra momba ny fanaovan-gazety Betsaka ny fanontaniana tokony hipetraka
Ao anatin’ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety dia hisy ny tolakandron’ny 3 may hoavy izao, manomboka amin’ny 2 ora,
Ramily mpaka sary Haranty etsy amin’ny Hakanto Contemporary ny sangan’asany
Mpaka sary anisan’ny nanana ny lazany teto amintsika Rakotondrazaka Emile na Ramily izay teraka tamin’ny taona 1938 ary namoy ny ainy tamin’ny taona 2017.
Bemangily Belo/Tsiribihina Vehivavy bevohoka maty notifirin'ny miaramila mamo
Vehivavy iray vao 17 taona monja, bevohoka 5 volana no fantatra fa maty notifirin’ny miaramila kaporaly iray tao amin’ny kaominina Ankalalobe, Belo/Tsiribihina ny alatsinainy 25 aprily lasa teo.
Gaby Vakiniadiana “Ho lafo hatramin’I Madagasikara raha izao no mbola haharitra”
Ho asondrotra ny karaman’ny mpiasam-panjakana, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Vahoaka miray na VAMI. Firy isan-jaton’ny vahoaka Malagasy moa no mpiasam-panjakana,
Rehefa mety ny atao sahobakaka aza mampidi-dranonketsa fa rehefa tsy mety ny atao ranon’apango aza misy voay.
Tsy sasatry ny midona amin’ny rindrina Rafanjakana. Sary izao, serasera izao, fandokafan-tena izao,… tamin’ny dia tany Etazonia farany teo.
Fitsaboan-tena any ambanivohitra Dia an-tongotra hatrany amin’ny 35 km vao mahita hopitaly
Tena mijaly amin’ny fitadiavana tobim-pitsaboana ny olona any ambanivohitra. Raha araka ny fantatra mantsy dia mandeha dia an-tongotra hatrany amin’ny 35 km